अवैध भीओआईपी मार्फत रु. १२ अर्बको कल बाईपास - Himalkhabar.com
अर्थ/बजारसोमबार, जेठ ५, २०७१
अवैध भीओआईपी मार्फत रु. १२ अर्बको कल बाईपास
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अहिलेसम्म रु.१२ अर्ब ३६ करोड ४६ लाख ४ हजार ९५८ बराबरको अवैध कल बाईपास भएको जनाएको हो । अनुसन्धानको क्रममा अवैध भीओआईपी मार्फत् रु.१२ अर्ब ३६ करोड ४६ लाख ४ हजार ९५८ बराबरको कल बाईपास भएको ठहर गर्दै सीआईबीले माग दाबी गरेको जनाएको छ ।
सीआईबीले अहिलेसम्म अवैध भीओआईपी संचालन गर्ने १२० जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ९२ जना नेपाली र २९ जना विदेशी नागरिक रहेको सीआईबीको भनाइ छ ।
सीआईबीका अनुसार अवैध भीओआईपीमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक उपकरणसहित १९ हजार ३०४ थान विभिन्न कम्पनीका सिमकार्ड अहिलेसम्म बरामद गरिसकेको छ । सीआईबीले अहिलेसम्म ५८ ठाउँमा अवैध भीओआईपी विरुद्ध अप्रेशन संचालन गरेको छ ।
अवैध भीओआईपी संचानल गर्नेहरुले जीओआईपी प्रविधिको प्रयोग गरी कल बाईपास गर्दै आएको पनि अनुसन्धानबाट देखिएको छ । जीएसएम प्रविधि प्रयोग गरी भीओआईपी अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाईपास गर्ने परिस्कृत रुप नै जीओआईपी हो ।
अवैध भीओआईपी संचालन गर्ने दुई जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं–२३ ओमबहालका दिपेशरत्न शाक्य र सिन्धुली, झाँगाझोली गाविस–३ का शिव श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।
उनीहरु ४ जेठमा कोटेश्वरबाट पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुको साथबाट अवैध भीओआईपी संचालनका लागि प्रयोग नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड, जीओआईपी, ल्यापटप, राउटर, जीएसएम एन्टेना लगायतका उपकरण पनि बरामद गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।